ကိုလံဘတ်ရှာမတွေ့ ခဲ့တဲ့ နယ်မြေသစ်တွေပဲ ။
ရိုးသားမှုမပါဘဲ ဘတ်စ်ကားစီးရတာ သိပ်အဆင်မပြေလှဘူး
ကျုပ်တို့ မှာ ရွေးချယ်စရာမရှိဘူး၊
မှန်တဲ့အခါ ဘယ်ကိုမှ မပြန်ဘူး
ကျောက်သင်ပုန်းဟာ အစိတ်စိတ်ကွဲကြေလို့ ၊
ကျုပ်ရှာဖွေတွေ့ တဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့ တီရှပ်ထဲ
"အာဒံရဲ့ အချစ်ဦးဟာ ဧ၀မဟုတ်ဘူး"ဆိုတာပဲ ထွက်ကျလာတယ်။
အရာအားလုံးမှာ ကျုပ် လိပ်ပြာလုံတယ်။
အနုမြူဒဏ်ကြောင့် ပြာကျခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။
ရှုမျှော်ခင်းကို တစ်ဝက်ပဲ ကြည့်တော့မယ် ဂျိုး
အလှတရားကို ရိုးရှင်းတဲ့ ပုံစံမထုတ်ချင်တော့ဘူး။
ဒီနှစ်ထဲ ခေတ်ပေါ်မိန်းမတစ်ယောက်ကို ရိုးသားစွာချစ်မိတာလွဲလို့ 
ကျုပ်တို့ ဝတ်ထားတဲ့အင်္ကျီဘာတံဆိပ်လဲ
ကျုပ်တို့ သွားနေတာ လမ်းနံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ
ရာသီဥတုက အချိန်နဲ့ အမျှပြောင်းလဲတယ်။
ကျုပ်တို့ဘောင်းဘီဝတ်တယ်
ခေတ်ကို ဖြတ်မယ် ဂျိုး
တန်းတွေ ကွင်းတွေ ကိုင်ထားပါ
Posted by နေ့ သစ် at 6:41 AM7comments
ရန်ကုန်မြို့ ကြီးကို မကြာခဏခလုတ်တိုက်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူမိုက်လို့ 
တစ်ဘ၀လုံး သတင်းအမှားတွေချည်းပဲ ရတယ်
ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ဂျစ်ပစီမိုးတိမ်ဟာ မျက်နှာကျက်မှာ တ၀ီဝီလည်လို့ ၊
လူသားနှစ်ဦးရဲ့ တွေ့ ဆုံ ယုံကြည်မှုခဏမှာ
Posted by နေ့ သစ် at 3:27 AM3comments
မီးခိုးမှုန်တွေလို ခင်ဗျားထွက်သွားတဲ့နေ့ က
ခင်ဗျားဆံပင်တွေရဲ့နေ့ စဉ်ဝင်ငွေက
ကျုပ်တို့ မြို့ ကောင်းကင်မှာ ရှည်လျားပျော်ဆင်းလို့ ။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတဲ့ လူငယ်တွေပဲ ဂျိုး
ကျုပ်တို့ ကိုဘယ်သူမှ အစိုးမရနိုင်ဘူး။
လက်နဲ့ ကဗျာရေးသူ လူတစ်ရာထက်
ခင်ဗျားက အပြိုင်အဆိုင်ကင်းတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ
ခေတ်ဟာ စစ်ကျန်ဘတ်စ်ကားအိုကြီးလို တရွေ့ ရွေ့ 
Posted by နေ့ သစ် at 2:21 AM 1 comments
ဆံပင်မညှပ်ပဲနေလို့ ကျနော့်ဆံပင်တွေ ရှည်လာတယ်
တနင်္ဂနွေကို ကျောပေးထိုင်နေတဲ့ ဓာတ်တိုင်
ညဟာ သူ့လက်သည်းခြေသည်းတွေကို ညှပ်ထားတယ် ။
ရုတ်တရက် ရီဝေမှိုင်တွေသွားခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ
ဆံပင်မညှပ်ပဲနေလို့ ကျနော့်ဆံပင်တွေ ရှည်လာပြီ။
အမှတ်(၂) လမ်းမကြီးဟာ အတိုင်းသား ။
တစ်လက်စတည်း သံယောဇဉ်ပါဖြတ်လိုက်တယ် ။
Posted by နေ့ သစ် at 8:01 AM2comments
ရာသီဥတုက ဂျင်းဘောင်းဘီကို ခေါက်တင်ထားတယ်။
ညနေစောင်းစောင်းက လေအေးပေးစက်ထဲမှာအိပ်ပျော်လို့ ၊
ဖွင့်ထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်ဟာ ကာရေဘီယံပင်လယ်ထဲမှာ၊
ဒီဘ၀ ကမ္ဘာမကျော်တော့မယ့် အတူတူ
ဗီသိုဗင် အရပ်ဘယ်လောက်ရှည်သလဲ ကျွန်တော် မသိဘူး။
အခုဆို ရန်ကုန်မြို့ ဟာ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်လို၊
ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်ကို ကျွန်တော် မော့သောက်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ၊ တော်လှန်ရေးသမား။
ရထားပေါ်က သံယောဇဉ်တွေ ပစ်ချခဲ့။
အခု၊လူငယ်တွေ ဘတ်စ်ကားစီးပြီးခေတ်ကို မီအောင်လိုက်နေတယ်။﻿
Posted by နေ့ သစ် at 10:35 PM3comments
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ကြယ်မကြွေတဲ့ အရပ်ဆီ လမ်းလျှောက်တယ်
ကျွန်တော်က ဗန်ဂိုးကိုအားကျလို့ နားရွက်ဖြတ်ပစ်တယ်
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ကျောက်သင်ပုန်းတစ်ချပ်လို ရယ်မောတဲ့အခါ
ကျွန်တော်က ဒုဌ၀တီမြစ်ကြီးကို မောင်းနှင်နေလိုက်တယ်
သံချောင်းခေါက်သံ ဆယ့်နှစ်ချက် ဆုံးသွားတော့
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဟာ ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုခေါင်းအုံးအောက် ထိုးထည့်လိုက်တယ်
ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်ဟာ အီလက်ထရောနစ်ဖိနပ်တွေပေါ်မှာ
နံရံမှာ ကပ်ထားတဲ့ ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်ရဲ့ ဓာတ်ပုံက
အီရတ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀အာမခံချက်၊
ယနေ့မနက်စာက နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဟာ ခေါင်းတလားထဲ ၀င်အိပ်တယ်
ကျွန်တော့်သစ္စာတရားကတော့ ကျွန်တော့်ကိုထားပြီး ကားကြုံနဲ့ လိုက်သွားတယ်
ပင်လယ်ကဗွီးပင်လေးဟာ သေနတ်ပြောင်းဝကထွက်ကျလာတဲ့ မနက်ဖြန်ထဲမှာ၊
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဟာ အမေရိကတိုက်ကို ရှာဖွေဖို့ ဆိုပြီး
ဖိနပ်မစီးဘဲ ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ထွက်သွားတယ်၊
ကျွန်တော်က လွမ်းလွန်းလို့ကျောက်စရစ်ခဲကို ခြေထောက်နဲ့ ကန်နေမိတယ်။
Posted by နေ့ သစ် at 6:28 AM5comments
အဲဒါ လိမ္မော်သီးခွံတွေနဲ့ခြေလှမ်းလှလှလေးတွေ၊
ညနေခင်းကို တဂျစ်ဂျစ်ကုတ်ဖဲ့လို့ ။
ငါနဲ့ မြရာပင်ကြီး အိပ်မက်ချင်းလဲခဲ့ကြတယ်။
Posted by နေ့ သစ် at 6:39 AM0comments
ကျွန်တော်တော့ အဖြူရောင်ဇုံလို့ ထင်ခဲ့တာပဲ
ရန်ကုန်ဟာ မှတ်၊ခြင်၊ယင်တွေ အုံခဲလို့ 
အနက်ရောင်သွေးတွေ စက်စက်ကျလို့ ၊
သူ့ ခမျာ ဖြူလျော်လျော်နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ ၊
“ ကျန်းမာပါစ ရန်ကုန်”
မိန်းမလှလေးတွေရဲ့ရယ်သံတွေ၊
တအီအီညည်းနေတဲ့ ခိုတွေရဲ့ ဆာလောင်မှုက
ကားဟွန်းသံတွေ တလူလူလွင့်လို့ ။
အိမ်မြောင်တွေရဲ့ငွေကြေးချို့ တဲ့မှုအတွက်
သူတို့ဘာကို လိုချင်တာလဲ
သူတို့ဘာလို့ လိုချင်တာလဲ
စီးပွါးရေးပျက်ကပ်ဆိုက်နေတဲ့ စိတ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ 
သူတို့ ရှာဖွေနေတဲ့ ခန္ဓာဗေဒ၊
မာနတရားရဲ့ နာကျင်မှုက မီးခဲရဲရဲတွေကို ကိုင်လို့ ၊
ပုံပြင်ထဲက ပလတ်စတစ်ညှော်နံ့ တွေနဲ့ မြို့ ကြီးပဲ၊
ရှပ်အင်္ကျီအဖြူကို လာရောက်တွယ်ကပ်တဲ့
အစာအိမ်တလျှောက် ပျို့ တက်လာတဲ့ နာကျည်းမှုတွေနဲ့ 
ဒါ ဘ၀ပဲလို့... ဆူးလေလမ်းမကြီးကို အော်ပြောလိုက်တယ်။
ဒါ ကျွန်တော့်နယ်မြို့ လေးမဟုတ်ဘူး။
ငါ့အတွက် ဒါ တရားပါတယ်ကွယ်၊
ခိုသားစားကြတဲ့ လူမဲကြီးတွေရဲ့ မီးပုံပွဲမှာတော့
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဝယ်ရတာ ဘယ်လောက်ဈေးကြီးမှန်း
ပင့်ကူယှက်ခံလိုက်ရတဲ့ အိမ်မက်အကောင်းစားတစ်ခုနဲ့ 
မုန့် ဆီကြော်တွေနဲ့သူတို့ လေးတွေ ပျော်နေမှာပဲ။
မျက်ရည်လဲ့နေတဲ့ မနက်ခင်းတွေပဲ အစားပြန်ရတယ်။
ဒါဟာ မင်းပစ်ချပေးခဲ့တာတွေပေါ့ တည်ကြည်ခင်
ရန်ကုန်မြို့ ကြီးထဲမှာ တစ္ဆေတွေကကြခုန်ကြလို့ ။
မြွေဆိပ်သင့်နေတဲ့ နေ့ လည်ခင်းတစ်ခုထဲမှာ
စိတ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို စကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့ လောင်းကြေးထပ်ပြီးပြီပဲ
ငါ့အတွက် နားခိုစရာ ဇရပ်မလိုတော့ဘူး။
ငွေကြေးနဲ့ ဝယ်ယူထားတဲ့ သစ္စာတရားရဲ့ လက်မှာ
မရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံရဲ့ ကမ္ဗလာမွေ့ ယာပေါ်
စူးရှရှအန္တရာယ်နံ့ တွေနဲ့ သားရဲတွေကျက်စားတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာ
ကျွန်တော် ထီးပျောက်ခဲ့တဲ့ ညနေတွေပေါ့၊
တည်ကြည်ခင်ရေ ... မင်းမသိခဲ့ဘူး
အငွေ့ တလူလူထွက်နေတဲ့ ပျော့ညံ့ညံ့မိန်းမတွေ
ငါ ဘယ်လာက်တောင် ရိုင်းစိုင်းခဲ့ပါသလဲ။
Posted by နေ့ သစ် at 1:55 AM2comments
ကွမ်းတမြုံ့ မြုံ့ ဝါးရင်း
ပုပ္ပါးတောင်ကြီးကို ထိုင်ကြည့်နေတဲ့မြို့ ၊
အိပ်မက်အပြည်ထည့်ထားတဲ့ လွယ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ 
လောကငရဲကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရွေးယူဖို့ 
ဘယ်သူ့ ကိုမှ နှုတ်မဆက်ဘဲ
ရက်စွဲကိုတွေကို အစိမ်းလိုက်စားဖို့ ကြံနေတဲ့ လူမိုက်၊
အရိုးခိုက်အောင်နာလှတဲ့ မော်တော်ကားသံနဲ့ 
နယ်မြို့ လေးရဲ့မွန်းလွဲ၂ နာရီခွဲအချိန်၊
မင်းကိုငါ အပြီးပိုင်နှုတ်ဆက်တယ်လို့ 
မြင်းလှည်းတွေနဲ့ မြို့ လေးကို ပြောမထွက်ခဲ့ဘူး။
အရက်တွေလည်း သိပ်မသောက်နဲ့ ”
အဝေးကားကြီးက တရွေ့ ရွေ့ 
အဖေ့ အပြုံးနဲ့ မျက်ရည်တွေက တရွေ့ ရွေ့ ။
သံချေးတက်နေတဲ့ မောင်မြန်မာ စက်ဘီးလေးကိုကြည့်ပြီး
ယင်ကောင်တွေ တ၀ီဝီနဲ့ မြို့ လေးပေါ်ကို
အစာရှာမရတဲ့ ငှက်တို့ အိမ်ပြန်ချိန်
ပြတင်းတံခါးတွေ ပွင့်လို့ ၊
ကျီးကန်းမဲမဲတွေပဲ ကျွန်တော်တွေ့ ရတယ်။
Posted by နေ့ သစ် at 12:27 AM7comments
အသည်းကွဲတယ်ဆိုတာ ဂျိုနဲ့ လား အမေ
ဓားသွားနဲ့ တူတဲ့ ပန်ကာဒလက်တွေရဲ့ 
ကျွန်တော်ဟာ ကျည်ကာအင်္ကျီမပါတဲ့
သူကလည်း ပန်းတစ်ပွင့်ပန်လို့ ၊
ပြုံးလို့ ၊ရွှင်လို့ ၊
ထုံးစံအတိုင်း နှုတ်ခမ်းတွန့် တယ်ဆိုရုံလေး ခပ်ဟဟရယ်လို့ ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဘွဲ့ ရပညာတတ်ခေတ်တစ်ခေတ်အလယ်
ခြေသံတွေ တရှပ်ရှပ်နဲ့ ။
Posted by နေ့ သစ် at 2:09 AM3comments
သူမက ပန်းတစ်ပွင့် ပန်ထားတယ် ကျွန်တော့်မှာ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်နေတယ်
မိုးမိထားတဲ့ အိပ်မက်တွေလောက် လှတာ
လောကမှာ ရှိမယ် မထင်ဘူး ။
ရပ်နေတဲ့ အဖာအထေးများနဲ့ လူ
တစ်ယောက်သောသူဆီ မျက်နှာမူနေတယ် ။
ဘ၀ရဲ့ မကျေလည်မှု ဆိုတာ
ရေစက်လက် ကျနေတဲ့ ထီးတစ်လက် ၊
ဗင်ကား အဖြူလေးက မျက်ရည်တွေကို တက်ကြိတ်သွားတယ် ။
မြို့တော်ရဲ့ ရေကြီးမှု သတင်းထဲမှာ
ထင်းခုတ်သွားတဲ့အဖေ ပြန်မလာသေးဘူး ။
မမြင်ဖူးလိုက်တဲ့ တနင်္ဂနွေ မိုးသည်းသည်းဟာ
တငွေ့ငွေ့ လောင်မြိုက်လို့ ။
ခပ်ဆွေးဆွေး ငေး ရင်း ။
နေလုံးကြီးကို လက်နဲ့ ချေပစ်လိုက်တယ် ။
သောကြာနေ့အချို့ သေဆုံးကုန်ပြီပဲ ။
ချစ်သူ့လက်အလား ဆုပ်ကိုင်ထားမိတဲ့ လူငယ်
ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် မသိတဲ့ အိပ်မက်တွေ
ရောင်းတယ် ၊ ၀ယ်တယ် ။
မာယာပြာပြာတွေနဲ့ လှလို့ ပလို့ ။
ပါရီမြို့ ၊ အီဖယ်လ်မျှော်စင်
ငွေရေးကြေးရေး ကမ်းခြေ ၊ ထွေရာလေးပါး ညမနက်စာ
မှတ်စုစာအုပ် နောက်ဆုံးမျက်နှာက မိန်းကလေး ။
ထီလှည်းလေးဆီက လွင့်လာတဲ့ သီချင်းသံဟာ
၀ါကြန့်ကြန့် လျှပ်စစ်မီးသီးကို လာရောက် တိုက်ခိုက်
ညအိပ်တေးမရှိတဲ့ မြေကမ္ဘာ ။
သူမက ပန်းတစ်ပွင့် ပန်ထားတယ်
ကျွန်တော့်မှာ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်နေတယ် ။
မာနနဲ့ စိမ်ပြေးတမ်း ကစားနေတဲ့ ကြွက်တွေရယ်
အကောင်းစား စက္ကူနဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ရယ် ။ ။
“ခြစ်ရာ ၁ ၂ ၃ ၄ .... စသည်ဖြင့်” မှ
Posted by နေ့ သစ် at 12:47 AM5comments
ငါ အခု မိုးရွာထဲလမ်းမလျှောက်တော့ဘူး အကြည်
ဘယ်၍ ဘယ်မျှ ငိုကြွေးခဲ့ရသလဲ
ငါမသိသလို၊မင်းလည်း သိနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘယ်တော့မှ မျက်ရည်မထွက်တဲ့ ကတ္တရာလမ်းဆိုတာ
သူ့ ရင်ဘတ်သူ ခွဲပြထားတဲ့
ငါ့ကိုယ်ငါ မေ့လျော့ထားပါတယ် အကြည်
ရွှေတိဂုံဘုရားသမိုင်းပြတိုက်ရှေ့ က ညနေခင်းတစ်ချို့ တစ်ဝက်လေးရယ်၊
ကဘူးလ်မြို့ ရဲ့ ဗုံးပေါက်ကွဲသတင်းတွေနဲ့ 
ခေါင်းအုံးအောက်က နှိုက်ယူခံလိုက်ရတဲ့ ရက်စွဲလေးခမျာ
ဆောင်းစရာ ထီး မရှိရှာဘူး။
ငါ့ကိုယ်ငါ ပျော်အောင် နေပါတယ်
အော်စကာဝိုင်းလ်(ဒ်)ရဲ့အယူအဆတွေကိုလည်း
ဆန့် ကျင်ဘက်အမြင်နဲ့ငါမတွေးတော့ဘူး။
နေ့ စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေနဲ့ 
မနက်စာမစားဖြစ်တဲ့ နေ့ တွေများလှပြီ၊
“အစစအရာရာ အဆင်ပြေရဲ့ လား ညီလေး ... ”လို့ 
ပြာချထားတဲ့ ကောင်းကင်အစအနတွေနဲ့ 
ရှာလို့ မရတဲ့အဖြေတွေ အများကြီး။
ဆံပင်တွေ ရှည်လာလို့ 
ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်ရှာ မရလို့ ။
ရန်ကုန်မြို့ မီးပွိုင့်တွေက နီလို့ နေတုန်း
လူသားစက်ရုပ်တွေ နေထိုင်ကြတဲ့ ကမ်းခြေအတုထဲ၊
အနာဂတ်ကို ကိုင်ဆွဲပြီး ခပ်ရဲရဲနေပါ
မိုးသည်းသည်းမဲမဲရွာခဲ့တဲ့ သာမန်သောကြာနေ့ တစ်နေပေါ့။
“ညအချိန် ကဖေးဆိုင်စာမျက်နှာ” ဆိုတဲ့
အရောင်အဆင်း ခပ်မွဲမွဲနဲ့ 
သူ တွေ့ လိမ့်မယ် မထင်ဘူး။
ပိုလီယံတို့ တိုက်တဲ့ စစ်ပွဲကို
တော်စတွိုင်းလ်က ကမ္ဘာကျော်ဝတ္ထုရှည်ကြီးဖြစ်အောင် ရေးခဲ့သတဲ့
ငါနဲ့ငါ့မာနတရား စစ်ခင်းကြတာကိုရော
အို ... ငါ့ကိုယ်ငါပဲ
ရှိ ... စေ ... တော့။
မြင်သော်လည်း မတွေ့ နိုင်ပါစေ။
ကျွန်တော်လျှောက်နေတဲ့ လမ်းရဲ့ အလယ်မှာ
မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာသာစကားတွေ ထမ်းပိုးရင်းနဲ့ ပေါ့။
နင့်ကိုငါ သိပ်ချစ်တယ် အကြည်။
Posted by နေ့ သစ် at 4:41 AM3comments
လင်းပွင့်လက်များ၏ “ ခြစ်ရာ ၁ ၂ ၃ ၄ .... စသည်ဖြင့် ” ထွက်ရှိတော့မည်
“ ခြစ်ရာ ၁ ၂ ၃ ၄ .... စသည်ဖြင့်”
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ တွင် ထွက်ရှိပါမည်။
ထိုစာအုပ်တွင် လင်းပွင့်လက်များ၏ ကဗျာအပုဒ်(၂၀)နှင့် ၀တ္ထုတို(၁)ပုဒ် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
စာအုပ်ပါ ကဗျာစာပိုဒ်အချို့ အား
ငါတို့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရီဆိုဒ်ကယ်လ် လုပ်ထားတဲ့ နှလုံးသားတွေနဲ့ လည်ပတ်လို့
ငါတို့ဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အစွန့်ပစ်ခံပစ္စည်းတွေ ဖြစ်တယ် ။
ငါတို့ဟာ မူရင်းအသံထွက်အတိုင်း မရှိတော့ဘူး ဂျင်မီ ။
ဘုရားသခင်ဟာ ငါတို့အတွက် ကံကြမ္မာဆိုးတွေကိုသာ လက်သိပ်ထိုးပေးခဲ့တယ် ။
စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ မမှန်တဲ့ အနက်ရောင်သမ္မာကျမ်းစာတစ်စောင်ထဲက
လူရွှင်တော်တွေ ခုန်ပေါက်ပြေးထွက်လာခဲ့တယ် ။ (အဲရာဝေ)
`သွေး´ နည်းလို့မဖြစ်ဘူး ဂျိုး
လက်မောင်းကသတ္တိကို နှလုံးသားထဲ ဆွဲသွင်းထားပါ
ကမ္ဘာပြုမိုးဟာ ရွာတော့မှာပါ။ (ကြယ်ပန်းလူ)
တစ်ရက်ရက်ကိုကြွက်ဟာ အလောတကြီးလိုက်ရှာနေတယ်။ (နီလေး)
မှန်နေတဲ့ စကားမို့ ထင့်
လာခဲ့ ခေတ်သုန် ။
ငါ့လက်ကိုတွဲဖို့ရဲရဲလှမ်းခဲ့ ။
သေပြီးသားလူတွေ ပြန်ရှင်တယ် ။
ဆယ့်နှစ်လရာသီကနေ လွတ်ကင်းတယ်။ (ညီစိမ်း)
အကောင်းစား စက္ကူနဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ရယ် ။ ။ (နေ့သစ်)
ကျွန်တော့်ဆီက ပျံသွားတယ်။ ။ (ဇာတိ)
ရွာရိုးကိုးပေါက် လမ်းလျှောက်ဖို့ 
ငါမရောက်ရာ အရပ်မှာ နင်ပျော်စေ။ (နေနှင်းစက်)
Posted by နေ့ သစ် at 12:21 AM 1 comments
အဆင်မပြေလှတဲ့ ငါ့ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုထဲ
ငါတို့ မြေရဲ့အထီးကျန်မှုက
ရေဒီယိုသံလိုက်လိုင်းတွေ ပရမ်းပတာဖြစ်လို့ ။
Posted by နေ့ သစ် at 4:28 PM2comments
တစ်မြို့တည်း နေနိုင်ကာမှ ပိုဝေးကြတယ် ။
ဖုန်းကလေး တချက် မခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူး
ညစာ အတူစားဖို့ မခေါ်ဖြစ်ဘူး ။
တစ်နေရာရာသွား အပန်းဖြေဖို့ဖြစ်ဖြစ် အတူ မရှိနိုင်ခဲ့ဘူး ။
ငါတို့ ဘာလို့ ဝေးသွားလဲ ။
Contact List ထဲမှာ နံပါတ်တွေ အေးခဲလို့ ။
မီးခလုတ်ကို ထောက်ခနဲ ဖွင့်လိုက်တော့
ဘဏ်က ပို့လိုက်တဲ့ စာတွေ
ဒီ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပစ္စည်းတွေ တပ်ဆင်လိုက်ရင်
ဘဝက တကယ် smart ဖြစ်သွားပြီလား
အနာဂတ်ထဲ တိုးဝင်တဲ့ ခြေလှမ်းဆိုလား
နွေးထွေးလှိုက်လှဲ နေပျော်တဲ့ ဘဝလေးကိုလိုချင်ရင်
ဘယ်လို ဖုန်းကို ဝယ်သုံးရမလဲ
ဘယ်လို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတွေ ဘဝမှာ တပ်ဆင်ရမလဲ
ဘယ်လို အဝတ်တွေ ဝတ်ထားရမလဲ…
နွေးနွေးထွေးထွေး ဘဝလေးတစ်ခု ဝယ်ပါရစေ….
ဒီနေရာကို ငါတို့ ဘာအတွက်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ…
နေရာဟောင်းကို ငါတို့ ဘယ်တော့ ပြန်ကြမယ်ဆိုတာ…
ဇာတိ ပုည ဂုဏ်မာန တွေ အကြောင်း….
ဒစ်ဂျစ်တယ် နှင်းဆီတွေနဲ့ အစားထိုးခဲ့တာ ကြာပေါ့
Posted by နေ့ သစ် at 3:42 AM4comments
၄၈ ဘတ်စ်ကားတွေ တော်တော်ကြပ်တယ်
အစ္စရေးက ဘာကြောင့်များ ဂါဇာကမ်းမြှောင်ကို ပိတ်ဆို့ ထားရတာလဲ
ငါလည်း သူ့ ကိုသွားမကြိုဖြစ်တာကြာပြီ ဖြိုးစည်သူ။
ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ လူတွေ တော်တော်များမှာပဲ
သရဲရထားစီးရတာ ပြောသလောက်လည်း ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးကွာ
အခု ငါ့မှာ ဆေးလိပ်ပြာချွေဖို့ တောင် အားမရှိဘူး
သူ့ ကို ပုံတူအသစ်ရေးပေးမလို့ 
ငါ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာ သက်ပြင်းရှိူက်သံတွေကြားရတယ် ဖြိုးစည်သူ
နောက်ရာသီသစ်မှာ မန်ယူအသင်း ဖလားရဖို့ ဆုတောင်းပါရဲ့ 
လူငယ်ဆိုတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ ဘယ်တရားရနိုင်မလဲ
ပြောစရာစကားတွေ ရှားနေပြီလား မသိဘူး
ဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ ဖလား ဘယ်အသင်းရသွားမလဲ
ငါသူ့ ကို ပုဝါမကူ၊ရေမရှူဘဲ ချစ်တယ်
နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လိမ့်ဦးမယ် ထင်ရဲ့ ။
မင်းတို့ ငါတို့ လူငယ်ဘ၀မှာ
ငါတော့ အဲ့ဒီမှာ မအိပ်ဘူး။
ပြည်သူ့ ရင်ပြင်ရှေ့ ကဖြတ်သွားတိုင်း
ဘာလဲကွာ ... လူငယ်ဘ၀ဆိုတာ
ငါတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်
သူ့ ကိုအိမ်ပြန်ပို့ ပေးခဲ့တဲ့ တစ်ညနေက
Posted by နေ့ သစ် at 2:27 AM9comments
ညာဘက်လက်မှာ ဆေးခါးကြီးတွေနဲ့ 
မိုးတွေ ရွာပြီ တည်ကြည်ခင်
Posted by နေ့ သစ် at 2:17 AM5comments
ဘယ်သူမှ မမြင်ရတဲ့ အညတရစာရွက်
ငါဟာ လမ်းလျှောက်တဲ့ ငှက်ကွဲ့ ။
မင်းတို့တံခါးတွေက
မတည့်တဲ့ အသီးတွေ စားလို့ ။
မ၀ယ်နိုင်တဲ့ စံပယ်တင်မှဲ့ ကလေးကို
Posted by နေ့ သစ် at 5:17 PM6comments
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းမလေးနဲ့ မိုင်ငါးဆယ်ပတ်လည်မှာ
မေလက ဖက်ရှင်ကျကျ ၀တ်စားထားတယ်
ခေတ်ကြီးကို လက်နဲ့ တို့ ပြီး ငိုအောင်စလို့ 
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းမလေးရဲ့ယာဘက်နံဘေးမှာ
လရောင်ကိုသွေးပြီးလိမ်းထားတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ 
လိုရာခရီးကိုလည်း သွားတတ်သေးရဲ့ ၊
ရေတွေ ကြည်လင်နေရင်ပဲ ပျော်နေတတ်တာ၊
သီချင်းအေးအေးကို ဆိုလို့ 
Posted by နေ့ သစ် at 5:55 AM7comments
လာခဲ့တဲ့လမ်းက ဖမ်းလို့ မရတဲ့
တစ်ကိုယ်တည်း အရိပ်တွေနဲ့ ၊
ကျွန်တော့်မှာ ဘာမှပြောစရာမရှိလို့ မပြောတော့ဘူး။
Posted by နေ့ သစ် at 10:17 PM2comments
ငါတို့ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးပေါ်ကို အပူလှိုင်းကျနေတယ် တည်ကြည်ခင်
ခိုပြာအုပ်တွေ တအီအီနဲ့ ၊
နင် ကိစ္စအ၀၀မှာအဆင်ပြေပါရဲ့ လား
ဒီရာသီမှာ ငါတို့ မန်ယူအသင်း ဖလားမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့
မနေ့ ကပဲ ငါ့ညီတစ်ယောက်ကို ပေးပစ်လိုက်ပြီ။
တည်ကြည်ခင် ... တည်ကြည်ခင်တဲ့
ဒီနာမည်လေးကို မေ့ဆေးအနေနဲ့ ငါသောက်လိုက်မိတယ်
နင့်ကိုငါ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်မရခဲ့ဘူး
အခုတော့ သံယောဇဉ်တွေ ဆူးပြီထင်ပါရဲ့ ဟာ၊
နင်တို့ ထီးတန်းအိမ်ယာရှေ့ 
နင်တို့ တိုက်ခန်းက ချထားတဲ့ခေါင်းလောင်ကြိုးလေး
အပေါ်ထပ်က ငါ့အစ်မ၀မ်းကွဲနဲ့ 
မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်တဲ့ ဗင်းနစ်မြို့ ကြီးလေ၊
ပန်းချီကားတွေ ရှိတယ်၊အလှတရားတွေ ရှိတယ်
ပြီးတော့ မမြင်နိုင်တဲ့အပ်ချည်ကြိုးလေးတွေနဲ့ ။
လျှို့ ဝှက်ချက်တစ်ခုခုကို သိနေသလိုပုံစံမျိုးနဲ့ 
ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိ ဒီလိုပြုံးပြုံးပြနေကျပဲဟာ။
နင် အဆင်ပြေရဲ့ လား
ကိစ္စအ၀၀မှာ အဆင်ပြေပါရဲ့ လား တည်ကြည်ခင်၊
ဘုရားတရားနဲ့ မိဘဆရာသမားကို မမေ့နဲ့ 
တစ်နေ့ ကတောင် နင့်အကြောင်းတွေ ပြောဖြစ်သေးတယ်
ကိုညီစိမ်းတဲ့ ... နင်သိတယ်မလား
ဘယ်တော့မှ အိပ်ရေးမ၀တဲ့ အစ်ကိုလေ။
နင် ဟိုကို ဘယ်တော့ သွားမလဲ
နင် ဘယ်တော့ ပြန်လာမလဲ
ငါ့မေးခွန်းတွေကို မဖြေလိုက်ပါနဲ့ 
စိမ်းနေတဲ့ မီးပွိုင့်တွေနီလာတာကို စိတ်မရှည်စွာစောင့်ရင်း
နင် အဆင်ပြေပါစေ တည်ကြည်ခင်
အစ်ကို ညီစိမ်းရေ ...
ကျွန်တော့် နားရွက်ကြားက ပန်းပွင့်ဖြူဖြူလေးတွေ
ပြည်သူ့ ရင်ပြင်ရှေ့ က သစ္စာစကားနဲ့ သီချင်းအေးအေး
သူငယ်ချင်းဆိုတာ မိုးကောင်းကင်နဲ့ တူတယ်၊
သံသရာထဲက ရေစက်ရေပွင့်ကလေးတွေနဲ့ တူတယ်။
Posted by နေ့ သစ် at 12:05 AM 14 comments
ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ အစ်ကို ကိုနီလေးအတွက် မွေးနေ့ လက်ဆောင်။
(မွေးနေ့ အမီတင်မပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ အစ်ကို)
Posted by နေ့ သစ် at 7:11 AM 10 comments
အခု ကျွန်တော့်အသက် ၁၉ နှစ်
ဒီရေလို တက်လိုက် ကျလိုက်
အာရုံကြောထဲမှာ ရမ်းကားတတ်တဲ့စိတ်မရှိတာကလွဲလို့ 
ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူမိုက်လို့ ပြန်သတ်မှတ်တယ်။
ဒီနှစ်ထဲ ပုလင်းကွဲမရှဖို့ ဆုတောင်းမယ်၊
ပိုက်ဆံရေသလို ထိုင်ရေပစ်ချင်လို့ ။
Posted by နေ့ သစ် at 1:08 PM5comments
မြို့ ပြလူငယ်ရဲ့အရိပ်ဟာ
မာနတွေ တစ်ခွဲသားနဲ့ 
ဒါဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ နာရေးသတင်း။
ကမ္ဘာ့ ကြီးအရေး မတွေးခဲ့ကြဘူး။
လူငယ်က ခေတ်ကို ဖြတ်တယ်၊
ခေတ်က လူငယ်ကို ပြန်ဖျက်တယ်။
ကုရာနတ္ထိဆေးမရှိတဲ့ ဝေးကွာခြင်းတွေအတွက် ၊
မနက်ဖြန်မှာ ၀ယ်လို့ မရတော့တဲ့ မနက်ဖြန်များအတွက်။
Posted by နေ့ သစ် at 4:01 AM3comments
မိုးတိမ်တွေ ပြုတ်ကျလာမလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ 
ဆေးလိပ်ငွေ့ တွေ မှုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
ချွေးစေးပျံနေတဲ့ ရာသီဥတုအပျက်တစ်ခုနဲ့ 
အလွမ်းတေးကို သူတို့ ဆိုကြလို့ ။
ဟိုး ... အဝေးကြီးမှာလေ
Posted by နေ့ သစ် at 1:34 AM3comments
အတွေးများစွာထဲက စီးကရက်နံ့ ကို မုန်းတီးခဲ့
“ညီမလေး မမမြင့်” ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့
ရက်ထပ်နှစ်မှာ ဖေဖေါ်ဝါရီနဲ့ရန်ဖြစ်သူ၊
တို့ နှစ်ဦးတွေ့ စ ၀ါဆိုတစ်လပေါ့
မနက်ဖြန်များနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ သူ၊
ရှေ့ နေတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နဲ့ 
ငါတို့ တွေ့ စ ၀ါဆိုတစ်လပေါ့။
နင့်ရယ်သံတွေ ငါတွေ့ ရှိခဲ့
၀ါဆိုလေနဲ့ အတူ ငါ့စိတ်လည်း ကိုင်းညွတ်၊
ငါတို့ တွေ့ စ ၀ါဆိုတစ်လ။
အနောက်နေ ထွက်သော ယုံတမ်းတွေမေ့ပစ်
စာမျက်နှာချို့ တဲ့ခဲ့ရသူ ငါ့မိတ်ဆွေမလေးရေ
ရုပ်၊နာမ်နှစ်ပါး မကွဲပြားတဲ့ ကမ္ဘာရွာကြီး၊
နေ့ နဲ့ ညပေါင်းများစွာ
ဖွာရရာ ပြန့် ကျဲသွား
နင် အရင်လိုသနပ်ခါးလိမ်းသေးရဲ့ လား။
ငါက မိုးဖြူဖြူများကြားက နှင်းလူ၊
ယနေ့ နဲ့ မနက်ဖြန်တွေကို မုန်းသူ၊
အိမ်ခြေယာမဲ့ မီးလောင်ပန်းများကို ပျိုးသူ၊
ဒီနေ့ လို စနေပေါင်းများစွာထဲ
ငါ့ သမိုင်းဦးပြာပြာကို နင် ဖြားယောင်းခဲ့၊
ငါတို့ တွေ့ စ ၀ါဆိုတစ်လကလို
နင်၊ အလေ့ကျပေါက်တဲ့ နတ်ပန်းပင်၊
ရည်မှန်းချက်နဲ့နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးသူ၊
တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားပျက်ကွက်သူ၊
ငါ ဆောက်လုပ်ခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။
Posted by နေ့ သစ် at 4:38 AM3comments
စက္ကူပန်းနဲ့ ချိန်ရွယ်ပစ်ချတာကို ခံရတယ်။
ရွှေနဲ့ ဆက်ဝယ်ရတာမှ မဟုတ်တာ။
နွေဦးရဲ့ကဗျာကို ဆိုကြတယ်။
တို့ တွေ ပိုလို့ များဝေးသွားသလား။
Posted by နေ့ သစ် at 7:33 AM 1 comments
Posted by နေ့ သစ် at 12:48 AM 1 comments
Posted by နေ့ သစ် at 12:42 AM0comments
မီးခဲရဲရဲတွေနဲ့ မွမ်းမံထားတဲ့ နတ်သမီးရုပ်တု၊
Posted by နေ့ သစ် at 1:52 AM 1 comments
ကမ္ဘာကြီးကို ပက်လက်လှန်လို့ မရတာ
Posted by နေ့ သစ် at 2:14 AM 1 comments
ကြိုးကြာငှက်တွေ တောင်အရပ်ကိုပြန်လာတာ မသိလိုက်ဘူး။
သက်တန့် ကြီး ပြိုလာတာကို
တစ်ခါတစ်လေ ပုသိမ်မြို့ ကြီးဖြစ်ချင်တယ်၊
တစ်ခါတစ်လေ ရန်ကုန်-ပုသိမ်ကားလမ်းမကြီး ဖြစ်ချင်တယ်၊
ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတွေရဲ့ မာယာအကြောင်း
Posted by နေ့ သစ် at 3:43 AM3comments
ဆောင်းရာသီတစ်ခု တိုးဝင်လာဖို့ ဆိုတာ
ရန်ကုန်သား မဟုတ်တဲ့လူငယ်အဖို့ 
ဓာတ်ငွေ့ ဗုံးတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ လေယာဉ်တစ်စင်းပဲပေါ့။
အိပ်ခန်းရဲ့ပိတ်လှောင်ပုံက
ကိုင်ဆုပ်မရတဲ့ စကားစတွေနဲ့ 
နွေနေ့ လည်ခင်း များစွာ
ပုသိမ်ဇာတိ၊မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သူ နဲ့ 
Posted by နေ့ သစ် at 2:43 AM6comments
လက်သည်းရှည်လာတဲ့ မြို့ ပြအရိပ်တွေကြား
နောက်ဆုံးရ ငလျင်သတင်းတွေ တိုးဝင်လာတယ်။
မီးခိုးခေါင်းတိုင်နဲ့မလွတ်တဲ့ တောင်လေဟာ
နွေရာသီတစ်ခု သွန်ချပစ်ဖို့ 
လွန်ခဲ့သောနှစ်များဆီ ခုတ်မောင်းပို့ လို့ ။
စက်ဘီးတွေစီးကြတဲ့ အညာမြို့ လေးက
နေ့ လည် နှစ်နာရီ၊သုံးဆယ့်ရှစ်မိနစ်မှာ ရပ်လို့ ။
သနပ်ခါးပါးကွက်ကြားနဲ့ကောင်မလေးကို
စကားစတွေ ပြောပေးနိုင်လိမ့်မယ် မထင်ဘူး။
ကံတရားရဲ့ပွဲမှာ
မြူခြေဆိုင်းတဲ့ တောင်တန်းတွေ ကျန်ခဲ့တယ်၊
ဂျပန်စက်ဘီး အစိမ်းရောင်လေး ကျန်ခဲ့တယ်၊
ရေခမ်းနေတဲ့ ထိန်ကန်ကြီး ကျန်နေခဲ့တယ်။
စက်ဘီးတွေစီးကြတဲ့ အညာမြို့ လေးမှာ
Posted by နေ့ သစ် at 4:56 AM4comments
ကမ္ဘာပျက်၍ / ပြတ်ရွေ့ ကြောင်းများဖြင့် / ကမ္ဘာပျက်ခြင်း
ဒီနေ့ ကမ္ဘာပျက်တယ် ..
တောမီးလောင်သလိုမျိုး .. စကားလုံးတွေ
အပြိုင်းအရိုင်း .. ကိုယ့် ဆီ တိုးဝင်လာကြ .. ။
သူမ ပုတ်ချခဲ့တဲ့ နှင်းဆီဝါ၀ါလေးမှာ ..
ကိုယ့် ၀င်သက်ထွက်သက်တွေ ..
၉၉ ရာနှုန်း .. ပါသွားတယ် ။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာပျက်ကြောင်း ..
သေချာအောင် .. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆွဲဆိတ်ကြည့်မိတယ် ။
ကြိုးမိန့်ပေးသံတွေ ကြားတယ် .. ။
လေတိုးသံတွေ ကြားတယ် .. ။
ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျသွားတဲ့ ညနေခင်းလေး ..
ကိုယ့် အိတ်ကပ်ထဲမှာ ခပ်နွမ်းနွမ်း ပြုံး လို့ .. ။
နွေနေ့လည်ခင်းက ပူစပ်ပူလောင် ထောက်ခံတယ် ... ။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာပျက်ပါမယ် ရှင် .. လို့ ..
ရေဒီယိုက ကြေငြာခဲ့သလား .. ?
နားထောင်လိုက်ရသူများ .. ဆိတ်ငြိမ်ပေးပါ .. ။
စိတ်ငြိမ်ဆေး သောက်ဖို့ လိုနေပြီ ထင်တယ် .. ။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင်လို ကောင်းပါ့မလား .. ။
ကဗျာတွေ အရင်လို ရေးနိုင်ပါဦးမလား .. ။
စီးကရက် မီးခိုးငွေ့ တွေထဲ အရင်လို ရှာနိုင်ပါဦးမလား .. ။
မျက်ရည်စိုနေတဲ့ မိုးတွေ ရယ် .. ၊
မိုးရေစိုနေတဲ့ မြက်တွေရယ် .. ၊ အရင်လို ရှိပါဦးမလား ... ။
စမ်းချောင်းထဲ အရင်လို လမ်းလျှောက်နိုင်ပါဦးမလား .. ။
လား ၊ လား ၊ လား ၊ လား ။
`လား´ ပေါင်းများစွာနဲ့ ငိုင်နေစဉ်မှာပဲ ..
ကိုယ့် နှင်းဆီဝါလေး `ဖတ်´ ခနဲ ..
ပုတ်ချခံလိုက်ရတယ် .. ။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာပျက်ကြောင်း နိမိတ်ပုံတွေ ပေါ်ထွန်းခဲ့သလား ။
တစုံတယောက် .. ခေါင်းစွပ်အင်္ကျီအနက်ရောင်လေးဝတ်ပြီး
အိပ်ပျော်နေမလား ... ။
တစုံတယောက် .. စာမေးပွဲနီးလို့ စာတွေပဲ ဖိကျက်နေမလား ။
သူမ ဖုန်းနံပတ် ကိုယ့်ဆီမှာ မရှိဘူး ။
ကိုယ့် ဘီရိုအံဆွဲထဲက ဂျယ်လီလေး ..
ကမ္ဘာပျက်တဲ့ထဲ ပါသွားမလား .. ။
သူမ မိုးပေးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်အိမ်လေးမှာ
ခရမ်းရောင် သက်တန့်တွေ ပွင့်နေမှာပါ .. ။
ကြယ်မြင် လမြင် .. ပျက်နေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ
ကိုယ့် အခန်းစုတ်ထဲက တစ်ခြမ်းပြတ် ကြယ်လေးတွေ
သတိရတိုင်း ထထ လင်းနေတုန်းပဲ ။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာပျက်ကြောင်း သေချာအောင် ..
ကိုယ့့််ကမ္ဘာကို ကိုယ်တိုင် ပြန်ဖျက်ကြည့်မိတယ် .. ။
(အခုတလော ကျွန်တော် ဖတ်မိသမျှထဲမှာ သဘောကျမိတဲ့ ကဗျာလေးပါ)
Posted by နေ့ သစ် at 6:24 AM 1 comments
Posted by နေ့ သစ် at 7:25 AM9comments
လင်းပွင့်လက်များ၏ “ ...
သူမက ပန်းတစ်ပွင့် ပန်ထားတယ် ကျ...